Jereo ny morontsiraka nudist tsara indrindra any Tenerife | Vaovao momba ny dia
Susana Garcia | | General, tora-pasika, Tenerife
La Nosy Tenerife no iray amin'ny toerana itadiavana indrindra any Espana noho ny toetrandro mafana be ao aminy mandritra ny taona sy ho an'ny morontsiraka maro be misy azy. Maro amin'ireo no morontsiraka miboridana ary mamela anao hanao naturisme mangina rehefa mankafy ny masoandro sy milomano tsara. Raha hitsidika ny nosy ianao dia mety te hahafantatra bebe kokoa momba ny morontsiraka nudisty ananany sy ny zavatra atolotray.
ny ny morontsiraka miboridana dia mety hanome nudism maimaim-poana na ho toerana ahafahana manao izany amin'ny fomba tsy maintsy atao. Ny ankamaroan'izy ireo dia mamela anao hisafidy malalaka izay mitsidika azy, hankafy ny safidy rehetra. Ho hitantsika izay azon'ny nosy Tenerife any amin'ny Nosy Canary atolotra antsika amin'ny resaka morontsiraka nudist.
2 Tora-pasika Los Morteros
6 Morontsiraka Las Gaviotas
La Tejita no morontsiraka fasika izay mipaka eo akaikin'ny Tendrombohitra Mena, izay iray amin'ireo teboka mampiavaka indrindra ny nosy izay hita avy amin'ny rivotra. Ity morontsiraka ity dia miavaka amin'ny rano madio sy ny toerana onja, satria matetika izy io dia misy onja sy rivotra. Tranonkala iray izay tsy maintsy tsidihina, na dia misy morontsiraka mitokana kokoa aza, saingy na izany na tsy izany dia misongadina amin'ny toerana misy azy izy ary ho iray amin'ireo malaza indrindra.
Tora-pasika Los Morteros
Ity amoron-dranomasina ity dia miorina amin'ny helodrano kely, noho izany dia akaiky kokoa sy mandray olona kokoa noho ireo lehibe kokoa. Any akaikin'ny Faritra voajanahary amin'ny hantsam-bato any La Caleta ary ny urbanisation manana anarana mitovy, izay no toerana mety indrindra hipetrahana. Mitoka-monina ity cove ity raha ampitahaintsika amin'ny hafa fa mahafinaritra sy milamina tokoa, ka mendrika izany. Sehatra voajanahary voaaro izy io ary noho izany dia hahita ny tenantsika ao anaty tontolo tena mahafinaritra isika ahafahana manao fampiharana ny fitanjahana. Ho fanampin'izany, manolotra rano madio mangarahara ho an'ny snorkeling na ny antsitrika izy.
Manana coves maro ity nosy ity noho ny fikaohan'ny ranomasina teo ambonin'ny vatolampy volkano nandritra ny taona maro, noho izany dia manolotra toerana maro antsika ahafahana manao fitanjahana amin'ny fomba mangina. Eo akaikin'ny faritra El Médano no misy ny morontsiraka La Pelada ary cove kely eo anelanelan'ny vato misy fasika mainty mahazatra ao amin'ny nosy ary manana 80 metatra ny halavany. Kely izy io nefa milamina, tsy misy serivisy ao aminy fa afaka avelanao eo akaikinao ny fiaranao ka mety ho safidy mety raha tsy te-handeha be loatra ianao.
Hita ity morontsiraka ity rehefa tonga any amin'ny nosy ianao satria akaikin'ny seranam-piaramanidina. fantatro momba ny volkano antsoina hoe Tendrombohitra Mena tena mampiavaka izany ary miavaka amin'ny tontolo iainana. Ity morontsiraka ity dia manome antsika ny fahafaha-manao nudism ao anaty tontolo miavaka izay tsy hitantsika ao amin'ny Saikinosy, noho izany dia tsy tokony hisalasala hanatona azy isika. Ilay lava-bato izay fantatra amin'ny anarana hoe Playa de Montaña Roja dia toerana akaiky kokoa noho ny morontsirak'i La Tejita izay mipaka eo akaikin'ny tendrombohitra ary fantatra kokoa. Amin'ny roa tonta dia afaka manao nudism ianao na dia mandray tsara kokoa aza ity lava-bato kely any amin'ny faritra be vato ity.
Ity dia tora-pasika dia noheverina ho iray amin'ireo tsara tarehy indrindra ao Tenerife mampihatra ny fitanjahana. Rano madio mangarahara, fasika mainty ary tendrombohitra maintso izay miavaka ary mamorona loko mifangaro tsy mampino izay tena mahavariana sy miavaka. Any akaikin'ny morontsirak'i Ancón no misy azy, misaraka amina sisiny. Tena tsara tarehy ity morontsiraka Orotava ity fa mila mitandrina kosa rehefa mandro amin'ny onja ka tsy dia mety loatra amin'ny fianakaviana.
Morontsiraka Las Gaviotas
Raha mandalo ny morontsirak'i Teresitas ianao, izay malaza amin'ny nosy, dia mila mijanona ao Playa de las Gaviotas ianao, izay avela ny fitanjahana. Voahodidin'ny maimaimpoana ny hantsam-bato sasany sy ny fahamendrehana sasany, izany hoe afaka mitafy akanjo na tsia isika. Ny hany lesoka dia ny fiakaran'ny rano dia kely kokoa izy io, fa raha mandeha amin'ny onja isika dia afaka mankafy azy io tsara kokoa. 250 metatra monja ny halavany saingy morontsiraka lavitra ny toeram-pizahantany amin'ny faritra mangina izany ary izany no antony mety hahatonga azy io ho tonga lafatra mankafy andro milamina eny amoron-dranomasina.
Ity tanàna amoron-tsiraka ity dia tena malaza ary miavaka avy amin'i Roque Benijo sy Roque la Rapadura. Izy io dia sary malaza an'ny Tenerife ary koa morontsiraka iray hafa ho an'ny fitanjahana. Torapasika amoron-tsiraka misy fasika mainty ary onja be izay tsy azontsika hadino rehefa mankany amin'ny nosy isika. Izy io koa no toerana mety indrindra hankafizanao amin'ny filentehan'ny masoandro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Tenerife tora-pasika nudist